တရုတ်ပဲတိုဟူး ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အဆင်သင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ > အဆင်သင့်ပဲ ၊ > တိုဟူး
တိုဟူးစည်သွတ်ဆိုသည်မှာ တိုဟူးခြောက်၊ရေ၊သကြား၊ဆား၊ပဲငံပြာရည်၊ငရုတ်သီး၊ရှလကာရည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စည်သွတ်ဘူးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ တိုဟူးစည်သွတ်ဘူး၏ ဘေးကင်းမှုကို များစွာတိုးတက်စေသည့် အတုအရောင်များနှင့် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ မရှိပါ။
တိုဟူးစည်သွပ်ဘူးသည် အေးပြီးခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိုလှောင်ထားပါက လ 30 ကြာ တာရှည်ခံပါသည်။ တိုဟူးစည်သွတ်ဘူးသည် အပန်းဖြေ အစားအစာ၊ အရေးပေါ် ရိက္ခာနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစားအစာများအဖြစ် အလွန်သင့်လျော်သော အစားအစာ ဖြစ်သည်။
အစိုင်အခဲ အကြောင်းအရာ- â‰¥65%
အကြံပြုချက်- ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အတုအရောင်များ၏ အကြောင်းအရာ- 0%
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် တိုဟူးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။
တို့ဟူးသည် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး တို့ဟူးပရိုတင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ် 8 မျိုးပါဝင်ရုံသာမက ၎င်း၏အချိုးအစားသည် လူ့လိုအပ်ချက်နှင့် နီးစပ်ကာ အာဟာရတန်ဖိုးလည်း မြင့်မားသည်။ ကယ်လ်စီယမ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အရိုးပွရောဂါဟာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ အရိုးကြီးထွားမှုအတွက် အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
တိုဟူးစည်သွတ်ဘူးတွေမှာ တာရှည်ခံဆေးမပါဘူး၊ ကြာရှည်ခံဆေးရဲ့ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
(၁) အချိုရည်အတုနှင့် ခရင်မ်ဆိုးဆေးအချို့သည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်သည် အသားနှင့်ငါးကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်။
(၂) ပြင်းထန်ပြီး နာတာရှည် အဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တိုဟူးစည်သွတ်ဘူးသည် တာရှည်ခံမပါဝင်ဘဲ မည်ကဲ့သို့ တာရှည်ခံမည်နည်း။
တိုဟူးစည်သွတ်ဘူး၏ အခြေခံအကျဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ ပိုးသတ်နိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ပုပ်သိုးနေသော ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားရန် အလုံပိတ်နှင့် အပူချိန်မြင့်သည့် ပိုးသတ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ကြာရှည်ခံဆေးထည့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်သမိုင်းရှိပြီး နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် HACCP အစားအစာဘေးကင်းရေးစနစ်၊ ISO22000 အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ISO14001 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကို အောင်မြင်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
3. စည်သွတ်အစားအစာ၊ ဖိသိပ်ထားသောအစားအစာ၊ ပူသောအစားအစာ၊ လက်ငင်းစားနပ်ရိက္ခာ၊ ဟင်းချိုထုတ်ကုန်များနှင့်ဤမျှလောက်အထိအတန်းကြီးခြောက်ခု၊ ဆယ်စီးရီး၊ အမျိုးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်၊ မျိုးကွဲပေါင်း 20000 တန်ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကထုတ်လုပ်မှု။
hot Tags:: တိုဟူး၊ တရုတ်၊ လက်ကား၊ ရောင်းချသူများ၊ အသစ်ဆုံး၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ HACCP